Maxaa la weydiinayaa taariikhda ugu horreysa? - Talooyin Ragga Casriga ah | Ragga Stylish
Maxaa la weydiinayaa taariikhda ugu horreysa?
Taariikhda ugu horreysa waxay noqon kartaa mid aan caqli-gal ahayn inaad awood u yeesho inaad sameyso aragti wanaagsan oo aad ku siiso nooca ugu fiican ee naftaada. Haddii aysan ahayn taariikh uun oo ay jirto cabsi, hubaal waxaad ka filayso qofkaas waxay aad uga sii badan tahay sidii loo fikiray.
Taariikhdu waxay abuuri kartaa daqiiqado hubin la'aan ah, ereyo qaldan ama aamusnaan aan raaxo lahayn mawduuc la'aan darteed. Ogaanshaha waxa looga hadlayo taariikhda ugu horreysa waxay noqon kartaa walaac haddii aysan jirin "dareen", in kastoo mararka qaarkood waxaa fiican in loo diyaar garoobo sida loo waydiiyo su'aalaha ku habboon oo gebi ahaanba loo guuleysto.
1 Hayso taariikhda koowaad ee saxda ah
2 Maxaan kala hadli karaa?
3 Su'aalaha taariikhda ugu horeysa
Hayso taariikhda koowaad ee saxda ah
Deggenaashaha, faahfaahinta, goobta, qaab-dhismeedka ... waa faahfaahinta raaxeeysa taariikh qurux badan iyo aragti wanaagsan oo ugu horreysa. Talo ahaan waa ku habboon tahay in la yiraahdo qofku waa inuu ahaadaa sida uu yahay, hadba sida dabiiciga ah ee qofku u muujiyo, fursadaha badan ee ay u leeyihiin inay abuuraan jawi aad u raaxo badan.
Waxaa la og yahay in taariikhda koowaad waa isku mid, Inta badan, gariir iyo xoogaa walaac ahTani waa sababta xiriirka ugu horeeya uusan u baahnayn inuu dheeraado. Waa inaysan socon wax ka badan laba saacadood Xitaa haddii taariikhdu madadaalo tahay, ma dhaawaceyso inay dhammaato waqtigaas ka dib, markaa waxay abuuri doontaa xiiso taariikhda labaad.
Goobaha ugu fiican ee lagu kulmo waa meelaha dadku isugu yimaadoMa ahan fikrad fiican inaad joogto meel aad ugu dhow sida guri, maadaama ay caqabad ku noqon karto qofka kale. Ama meelaha sida filimada ama meelaha mashquulinta weyn ka dhigaya inaanay adiga diiradda saarin.
Taariikhdaada ugu horeysa waa inaad ahaataa mid hagaagsan laakiin leh muuqaal dabiici ah, ha ku nuuxnuuxsan faahfaahinta qaarkood ee ka bixi kara shakhsiyaddaada ama tagi kara cadar fara badan maadaama ay yareynayso ficilnimada.
Waa muhiim in waxa aan dhihi doonno ay leeyihiin feker caqli gal ah oo runta u eg. Waxba lama siinayo farriimaha gudaha ee bixiya dareenka cabsida iyo nabadgelyo-darrada.
Maxaan kala hadli karaa?
Marka barafku jabo, waxaa la joogaa waqtigii laga hadli lahaa waxyaabaha ugu dabiiciga ah. Waa inaad la jaan qaaddaa mawduucyada dhexdhexaadka ah, ha ka hor imaanin qofka kale ama kor ha ugu qaadin codkaaga si loo dareemo.
Waa inaan iska ilaalino ka hadalka siyaasada, kubada cagta ama diintaWaxaa laga yaabaa inaad ka hadli karto wax ku dhaca xilligan xaadirka ah, laakiin adigoon aad u sii socon, uma baahnid inaad gasho muran.
Hadday ku caawinayso way fiicantahay in la isticmaalo aamusnaanta waxaana fiican in la isticmaalo dhaqdhaqaaqyada iyo booska jirkaaga. Tani waxay abuureysaa daqiiqado badan oo xoog leh waxayna siineysaa wax yar oo qarsoodi ah. Marka laga reebo tilmaamahan oo dhan Wadahadalka iyo weydiintu had iyo jeer micno badan ayay yeelan doonaan, laakiin waa in si sax ah loo sameeyaa. Marnaba dhib malahan inaad isku daydo inaad barato qofka kale waana sababta aan kuu siin karno hage yar oo ku saabsan nooca su'aalaha aad weydiin karto.
Su'aalaha taariikhda ugu horeysa
Rag kale xiriir ma la yeelatay? Waa mowduuc xiiso leh, haddii aad rabto inaad uga jawaabto si kooban, adigoon ka sii dheerayn su'aasha. Sidoo kale iska ilaali inaad ka hadasho lammaanayaashaadii hore si kastoo aad u dhaawacdid iyaga.
Maxaad jeclaan lahayd inaad ku sameyso noloshan? Waa hab wanaagsan oo lagu caddeeyo haddii haweeneydaasi ay leedahay ujeeddooyin iyo mashaariic astaan ​​u ah dabeecaddeeda.
Sidee u jeceshahay ragga? Su'aasha noocan ah waa mid aad u xiiso badan. Laga yaabee inaadan rabin inaad ku sameyso xishood, laakiin xoogaa geesinimo ah ayay ku xallin kartaa xoogaa shaki ah oo ku saabsan nooca ninka ay xiiseyneyso.
Maxaad ka jeceshahay xiriir? Su'aashani waxay la jaanqaadaysaa tii hore, waxay ku siin kartaa tilmaamo badan oo ku saabsan sida uu u jeclaan lahaa inuu kula noolaado xiriir xamaasad leh.
Yaad jeclaan lahayd inaad u ekaato? Waxaa laga yaabaa inuu madax ku leeyahay halyeeyo ama uusan haysan. Waa su'aal aan dambi lahayn oo dumar badani wali aqoon u lahayn sida loo cadeeyo, laakiin waxay jecel yihiin inay isweydiiyaan su'aasha noocan ah.
Wax ma ka badali laheyd waagii hore? Waa su’aashaas xitaa aan isweydiineyno. Jawaabtu waxay si mug leh uga hadlaysaa amni darrada qofkaas.
Maxaad jeceshahay inaad sameyso oo aad jeceshahay? Sidan ayaad ku ogaan kartaa waxa ay jecel yihiin, ogaadaan dhadhankooda iyo hiwaayadaha ay leeyihiin. Waa maxay waxa ugu fiican ee kugu soo maray nolosha? hubaal tilmaamo badan oo dheeri ah ayaa la siinayaa waxa uu door bidayo, tani waxay u adeegtaa sidii istiraatiijiyad lagu awoodo in la odoroso oo la doonayo in laga farxiyo ballantaada soo socota.
Halkee jeclaan lahayd inaad u safarto? Muxuu ahaa safarkii ugu fiicnaa noloshaada? Waa mowduuc xamaasad leh, maaddaama xusuus iyo waayo-aragnimo la wadaagi karo.
Ma leedahay saaxiibo waaweyn? Waa mid ka mid ah furayaasha kaa siin kara macluumaad badan oo ku saabsan noloshooda bulsheed. Haddii uu yahay qof aad u firfircoon, waxaad xiisayn doontaa sida fikradiisa saaxiibtinimo ula jaanqaadayso dadka kale. Haddii uu yahay mid qarsoodi ah, waxaa laga yaabaa inuu doonayo inuu diiradda saaro dabeecaddiisa nooc uun ka mid ah sababaha adiga xiisaha kuu leh.
Sidee carruurnimadiinu ahayd? Waa xaalad aad u sharrax badan si loo ogaado in gabadhaasi ay soo martay carruurnimo faraxsan ama haddii ay soo martay daqiiqado murugo oo ay hadda jiidi karto.
Waa sidee xiriirkaaga qoyskaaga? Waa hab lagu doonayo in si kalgacal leh loola wadaago sida xiriirka qoysku ugu dhisan yahay kuwa la jecel yahay.
Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato shakhsiyaddiisa, weligood ma yarayaan su'aalaha sida muusigtee ayaad jeceshahay inaad dhageysato? Su'aasha noocan ahi wax badan ayey ka sheegaysaa qofka, waxay ka hadlaysaa wax badan oo ku saabsan sida uu u fikiro iyo sida dareenkiisu yahay Filim kasta oo aad ka heshay Miyaad ku aragtaa telefishanka wax aad jeceshahay? Waxay sidoo kale yihiin su'aalo wax badan ka sheegaya dookha iyo dhadhanka iyada ku saabsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Maxaa la weydiinayaa taariikhda ugu horreysa?